रेनुले भरतपुर महानगरमा कतिको ल्याउँदै छिन् बजेट ? - अन्नपूर्ण टाइम्स
रेनुले भरतपुर महानगरमा कतिको ल्याउँदै छिन् बजेट ?
९ असार २०७९ बिहीबार १३:०५
सहकारीलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्न लागिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य रु एक अर्ब २५ करोड रहेकामा आउँदो आव रु एक अर्ब ५० करोड पुर्याउने लक्ष्य राखिएको अधिकारीले बताए ।
सङ्घ र प्रदेशको सशर्त बजेटसमेत थप भएकाले बजेटको सिलिङ बढेको अधिकारीले जानकारी दिए । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले सङ्घ, प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक शीर्ष व्यक्तित्वहरूका अतिरिक्त जिल्लाका क्षेत्रगत विज्ञहरुसँग बृहत् छलफल गरेर बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।